Iidijithali zemali: i-Bitcoin, i-Ethereum, i-Litecoin, i-Dash, ... konke malunga nee-cryptos | Iindaba zeGajethi (Iphepha 2)
I-Telegram ibhengeza ukumiliselwa kwe-TON, eyayo iBlockchain
Umnxeba, kuye wonke umntu wothukile, usandula ukubhengeza ukumiliselwa kwe-TON, ngokwenyani imali yenkampani ebonakalayo ekhethekileyo kunxibelelwano phakathi kwezixhobo.
Umculi we-50 Cent uba ngusozigidi emva kokwamkela iBitcoins yealbham ayikhuphileyo ngo-2014
Imvumi i-50 Cent iqinisekisile ngeakhawunti yakhe ye-Instagram, ukuba enkosi kwintengiso ye-albhamu ayikhuphileyo kwi-2014 kwaye evumele ukusetyenziswa kwayo kwe-bitcoin njengendlela yokuhlawula, ngoku une-7 yezigidi zeedola.
Yintoni iBitcoin Cash kwaye ingathengwa njani? Fumanisa i-Bitcoin Cash entsha kunye nendlela onokufumana ngayo imali eninzi yokutyala kule mali ye-imali yedatha.
Ungayithenga njani i-Bitcoin kwi-Coinbase (iphumelele i- $ 10 yasimahla)
Ukuba ufuna ukuthenga iBitcoins, nantsi inyathelo ngenyathelo lokufundisa ukutyala imali kwiBitcoin. Kwaye uzuze i- $ 10 SIMAHLA ngekhonkco lethu ngokutyala imali eyi- $ 100.
Ixabiso leBitcoin malunga nokudlula i-3.500 yeedola
Ixabiso leBitcoin lilungele ukwaphula ngaphezulu kwe- $ 3.500, ngenyanga emva kokuwa ngaphantsi kwe- $ 1.900.